Niditra tamin’ny andro fahatelon’ny fifanintsanana ny fiadiana ny Tournoi Pangalanes 2018. Fifaninanana tanterahina amin’izao fotoana izao ao an-tampon-tanànan’i Manakara, renivohitry ny Faritra Vatovavy Fitovinany. Ho an’ny taranja basikety manokana, sokajy N1A lehilahy, dia saika fandresena …Tohiny
Mivoy ny kanto malagasy, indrindra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Mandalo ary manovo aingavao eto an-tanindrazana ny tarika Njava. Ankoatra ireo mpikambana eto an-toerana, toa an-dry Dôzy sy Pata, dia saika any ivelany avokoa ny ankamaroan’ny …Tohiny
Mbola manjaka ny fitiavan-tena eo amin’ny filohan’ny Tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina sy ireo akaiky azy. Fantatra mantsy ankehitriny, araka ny fanadihadiana natao, fa tsy misy mahalala sy mahafantatra ny fisian’ilay tetikasa nambara tamin’ny fahitalavitra …Tohiny
Tovovavy manodidina ny 14 taona no hita faty tao Maninday, teo amin’ny lalana 500 metatra tsy ahatongavana any amin’ny oniversiten’i Toliara, omaly vao maraimbe. Vata mangatsiaka efa tsy nisy aina intsony no novantanin’ireo mponina tany …Tohiny